RASMI: Real Betis oo ku dhawaaqday inay la saxiixatay Héctor Bellerín – Gool FM
RASMI: Real Betis oo ku dhawaaqday inay la saxiixatay Héctor Bellerín
Dajiye August 31, 2021
(Spain) 31 Agoosto 2021. Kooxda reer Spain ee Real Betis ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la soo wareegtay xiddigga reer Spain iyo naadiga Arsenal ee Héctor Bellerín.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England, heshiiska uu Héctor Bellerín ugu biiray kooxda Real Betis ayaa ah mid amaah oo hal xilli ciyaareed ah, iyada oo aysan jirin wax dooq ah oo ay si toos ah ugu iibsan karaan.
Kooxda reer Spain ee Real Betis ayaa ku shaacisay boggeeda Twitter –ka in Héctor Bellerín ay kaga soo qaadatay naadiga Arsenal heshiis amaah oo hal xilli ciyaareed ah.
Héctor Bellerín ayaa u ciyaarayay Arsenal muddo toban sano ah, tan iyo markii uu kaga soo dhaqaaqay kooxda da’ayarta ah ee Barcelona sanadkii 2011, waxaana loo dallacsiiyay kooxda koowaad ee Gunners sanadkii 2014-kii.
Bellerin ayaa Arsenal u ciyaaray 239 kulan tartammada oo dhan, isagoo u dhaliyay 9 gool isla markaana caawiyey 29 gool, sidoo kale Bellerin ayaa 4 kulan oo kaliya la ciyaaray xulka qaranka Spain.
26 jirka reer Spain ayaa rajeynaya in dib ugu laabashada dalkiisa ay u noqon doono mid guul leh, shaqooyin badan ayaana sugaya isaga iyo kooxdiisa Real Betis, inta lagu guda jiro xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka La Lga dalka Spain.
Barcelona oo heshiis kala gaartay kooxda Atletico Madrid inay dib u ceshato Antoine Griezmann
RASMI: Arsenal oo la saxiixatay daafaca reer Japan ee Takehiro Tomiyasu